:: Oromo Liberation Front ::
Hawaasni Oromoo Konyaa Minnesota Guyyaan Yaadannoo Gotoota Oromoo Haala Hoo�aan Ayyaaneffate
Ebla 20, 2009 Yaadannoo Gootota ilmaan Oromoo kan bara 2009 guyyaa har�aa Ebla 18, 2009 as magaalaa St Paul bakka galma woldaa Hawaasa Oromoo keessatti haala hoo�aan ayyaaneffammee ooleera. Kabajamuu ayyaanaa kanarratti hoogannonni dhaabaa J. Hasan Huseen, J. Leencoo Baatii, J. Ibraahim Muummee fi qondaalonni naannoo kana jiran, miseensonni dhaabaa fi hawaasni Oromoo 200 ol ta�uu irratti argameera.
Akkasumas J. Abdataa Dhaabaa- miseensa koree jidduu ABO gadaa dabree keessammaa addaa ta�uudhaan bakka kanatti argamaniiru. Ayyaanni guyyaa kanaa faaruu alaabaa dargaggootaan dhihaateen kan jalqabe hoo ta�u, itti aansuudhaan manguddoonni (H. Qaasim Huseen Xaahiroo fi H. Birka) akka aadaa Oromootti eebba godhaniiru.
Dura deemaan konyaa ABO Minnesota J. Abbaa Heeroo hoogganootaa fi hawaasa bakka kanatti argamaniif simannaa godhuun- �guyyaa seena-qabeessa kana yeroo kabajjinuu jijjiirama hundee ABO keessatti yeroo ammaa dhalate jalattii hiriiruudhaan kaayoo jaallan kaleessa irratti woreegaman fiixaan baasuuf waadaa keenna haaromsina� jedhuun dhaamsa dabarsanii jiru. Hooggantoota dhaabaa keessaa Jaal Ibraahim Muummee haasaa godhaniin seena Guyyaa Gootota Oromoo kan ibsan hoo ta�u, itti dabalanii ilmaan Oromoo harka wol-qabachuudhaan umrii gabrummaa gabaabsinee guyyaa ayyaana kana biyya keennatti kabajannu as dhiheessuu qabna jedhaniiru. Kana malees, Oromoonni yeroo guyyaa kana kabajjinu gaddaa fi hidhii xuuxxachuu qofaan utuu hin taane qabeenya qabnuun QBO bira dhaabannee kaayoo jaallan kun irratti kufan bakkaan gahuu qabna jedhaniiru.
Kabajaa ayyaana guyyaa gootota irratti keessummaa adda ta�uudhaan kan afeeraman Jaal Abdataa Dhaabaa, miseensa koree jidduu ABO gadaa dabree, WBO keessatti woggoota dheeraaf dirqama guddaa bahuun qaamni isaanii QBO kan miidhame hawaasa Oromoo bakka kanatti argameef seenaa gootota Oromoo ilaalchisee barumsa bal�aa kennanii jiru. Jaal Abdataan ilmaan Oromoo QBO irratti woreegaman aarsaa ol�aanaan isaan baasan fi gootummaan isaanii kan yoomiyyuu hin dagatamnee ta�uu ibsaniiru. Akkasumas hameenyii diina ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiruu fi ture kan hiriyaa hin qabne ta'u ibsaniiru. Yaadannoon Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 15 jedhame haa murtaawu malee yaadannoon isaa jaallan guyyaa kana dura fi guyyaa kana booda woreegaman Oromoota miliyoonaan lakkaawaman guyyaa kana yaadatamu jedhaniiru. Kanaa boodas marii fi yaadaa akka kennatan woltajjiin banuudhaan hawaasni guyyaa kana ilaalchisudhaan dhaamsa woliif dabarseera. Akkasumas bakka bu�oonni caayaalee manguddoo fi dubartootaa hawaasni jarmayaa qaama jijjiirama ABOtti dabalamuun QBO galmaan akka gahu gaafataniiru. Qophii ayyaana kanarratti suuraaleen gootota Oromoo fi Videon isaan faarsu hawaasaaf dhiheessuun qophii adda taa�ee mul�ateera.
Tumsa WBOf kan oolu gumaachi doolara kuma sadii ol bakkuma sanitti wolitti qabameera. "Opinions published on News and Views section of this site are those of the authors and not necessarily that of OLF".